I-Cerquido Village & Spa - I-Sobreiro Studio - I-Airbnb
I-Cerquido Village & Spa - I-Sobreiro Studio
Ponte de Lima, Viana do Castelo District, i-Portugal
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Cerquido Village
U-Cerquido Village unokuphawula okungu-177 kwezinye izindawo.
U-Cerquido Village uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Kule-studio esincane, indawo yokungena yenziwa eceleni kwe-okhi enhle ye-cork ezokhathaza izinkumbulo nesigqi sezinye izikhathi!
Ngobuhle obuyingqayizivele kanye nefasitela le-panoramic ekuphileni kwezwe, i-Estúdio do Sobreiro yamukela izinsuku ngokukhanya okuthinta umphefumulo futhi iveze izinzwa.
Ukuvuka lapha kuzokwenza ufune ukuyeka isikhathi!
Ngombhede olala abantu ababili, indlu yokugezela kanye netafula elincane lapho ungalungiselela khona ukudla okulula, iyindawo ekahle kakhulu yokushaywa wumoya noma iholide labantu ababili!
Itholakala esifundeni saseViana do Castelo, eduze nolwandle nedolobha, iSerra d'Arga iyindawo yemvelo enenani elikhulu lezemvelo, umphumela wezinga eliphezulu lokongiwa kwemvelo nokuhlukahluka kwemvelo, ngaleyo ndlela kufakwe ku-natura 2000 European. inethiwekhi. Ngakho njengelinye lamazwe ezithakazelisayo izikhala kakhulu zemvelo ePortugal, izindlu inqwaba zinhlobo eziningi zezilwane nezimila. Esemngceleni wemifula i-Coura ne-Lima, i-Serra d'Arga iyinhlanganisela yezinto ezithakazelisayo zemvelo, i-ethnographic, ifa lomlando namasiko, elihlobene kakhulu nomuntu, nezakhamuzi zakhona, esikhathini samanje nasesikhathini esidlule.
Njengoba isiyonke indawo engamahektha angu-4 493 nokuphakama okukhulu okungamamitha angu-825, kunemizi eyisishiyagalombili yasemakhaya emithambekeni yeSerra d'Arga. Amadolobhana aseSerra d'Arga ahlanganisa ama-nuclei amathathu: i-Arga de Baixo, i-Arga de Cima kanye ne-Arga de São João Lawa amadolobhana asemaphandleni, anezakhiwo zendabuko ezisekela imisebenzi yezolimo yabantu bezwe. Idolobhana lakhe amagugu alulamekile futhi alondolozwa. Ukuhlanganiswa kwemvelo nezakhiwo, amasiko kanye nabantu bendawo kwenza iSerra ibe yindawo enelungelo lokuvakashela.
Izinganekwane, amasiko, imikhosi kanye nama-pilgrimages nawo athatha indawo evelele kubo bonke abafuna izindawo eziyingqayizivele kanye nolwazi ekuhlanganyeleni namagugu, imvelo kanye nabantu abaneminyaka eminingi yomlando.
Ibungazwe ngu-Cerquido Village
Inombolo yepholisi: 5115